Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Fahamarinana na Sahia amin'ny Travel sy fizahan-tany
Airlines • Airport • Aviation • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny lainga dia toy ny vatomamy ao amin'ny fivarotana vatomamy - tonga amin'ny loko sy habe samihafa izy ireo ary manolotra traikefa samihafa. Ny lainga sasany dia atosiky ny vola sy ny fitiavam-bola, ny lainga hafa dia entanin'ny filan'ny ego. Ny olona sasany handainga hisorohana ny sazy, ny hafa handainga amin'ny fientanam-po amin'ny fialana amin'ny lainga, fa ny hafa kosa mandainga hanarona lainga teo aloha.
Ny fikarohana nataon'ny Ethics Resource Center dia nahitana fa ny indostria mety hanilika ny fahamarinana dia ny fandraisam-bahiny sy ny sakafo (34 isan-jaton'ny mpiasa nahita lainga); zava-kanto, fialamboly ary fialamboly (34 isan-jato) ary mpivarotra ambongadiny (32 isan-jato). Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, lainga no ampiasaina hanaloka ny tena zava-misy. Mandainga ny sambo fitsangantsanganana momba ny fiarovana sy fanadiovana ny sambony sy ny mpandeha marary ary maty noho ny viriosy maro karazana. Ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia mandainga hanaronana toerana mahantra, tsy fidiran'ny rivotra amin'ny rafitra HVAC tsy ampy na fitanisana avy amin'ny sampana fahasalamana noho ny lakozia feno olona roach. Ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mandainga momba ny kalitaon'ny rivotra eny an-tsambo handrakofana ny zava-misy amin'ny fizarana virus amin'ny alàlan'ny rivo-drivotra sy ny aretina ateraky ny kabine voatsindry.
Fa maninona ny indostrian'ny fizahantany no manaloka ny marina?
Tonga amin'ny fotoana iray isika, na iza na iza miteny, na izay vakiantsika, dia mametra-panontaniana amin'ny vaovao izahay: zava-misy na foronina. Tonga amin'ny teboka iray izay tsy itokisako akory aza ny fomba fahandro avy amin'ny MarthaStewart.com.
Ny mpitondra tsy manan-kery avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina dia nandoto ny fiheveran'ny fahamarinana manerantany fa raha tsy maty ati-doha isika, dia fahendrena ny tsy matoky olona, ​​afa-tsy, angamba ny teny filamatr'i Etazonia, "In God We Trust." Araka ny Pew Research, 20 isan-jaton'ny olon-dehibe amerikana ihany no matoky ny governemanta any Washington, DC "hanao ny tsara" foana na amin'ny ankamaroan'ny fotoana (14 septambra 2020, pewresearch.org).
Fahamarinana mpisolo toerana
Ny fikarohana (2018) nataon'i Richard Edelman, (Filoha sy Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny orinasam-pifandraisana) dia nahatsikaritra fa ny fahaverezan'ny fahatokisana dia mety hiorina amin'ny zava-misy fa sarotra kokoa ny mamaritra izay marina sy izay tsy marina.
Azontsika atao ny manontany raha misy ny fetra eo anelanelan'ny zava-misy, ny hevitra ary ny fampahalalana diso. Raha ny mpanolotsaina amerikana an'ny filoha Donald Trump dia nilaza i Kellyanne Conway, nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Meet the Press (22 Janoary 2017), ho fiarovana ny fanambarana diso nataon'ny sekretera White House Press, Sean Spicer, momba ny isan'ny mpanatrika tamin'ny fanokanana an'i Donald Trump ho filohan'ny Etazonia, Conway dia namaly fa manome i Spicer, “zava-misy hafa.”
David Bersoff, mpikaroka iray miaraka amin'i Edelman dia nanapa-kevitra fa ny demokrasia dia mifototra amin'ny fahatakarana ny zava-misy sy ny fampahalalana azo ampiasaina amin'ny fifampiraharahana sy ny marimaritra iraisana, "Rehefa lasa izany dia mihozongozona ny foton'ny demokrasia manontolo." Misaotra an'i Covid-19 ary ny lesoka ataon'ny mpitondra manerantany, nanjary korontana ity tontolo ity, tototry ny fisalasalana ary rehefa manjaka ny tontolo io dia mihetsika eo amin'ny sehatra ny fahefana manam-pahefana.
Ny indostrian'ny fizahantany, andry teo afovoan'ny toekarena manerantany, dia nitsahatra tsy nisy tamin'ny endrika nahafantarantsika azy (vao tamin'ny taona 2019). Mampalahelo fa ny indostria, izay mora tratry ny loza, dia tsy afaka namorona na nahita làlana izay mitondra mankany amin'ny fananganana indray ny fahatokisan'ny mpanjifa. Raha tokony hanome zava-misy sy tarehimarika izy ireo dia omena lainga ny mpanjifa mifototra amin'ny fikarohana diso na ny Magical Thinking, miaraka amin'ny finoana fa ny fampahalalana diso dia hanodinkodina ny fo, ny saina ary ny carte de crédit an'ny olona, ​​hamerina azy ireo amin'ny fiaramanidina, fiaran-dalamby ary ho lasa fiara fanofana, mitebiteby hanao famandrihana ho an'ny fialantsasatra sy ny dia amin'ny orinasa.
Tsy vaovao akory fa misy fiatraikany ratsy amin'ny isan'ny mpizahatany sy ny traikefa fizahan-tany ny loza (voajanahary sy vitan'olombelona). Amin'ny tranga COVID-19, ny loza dia voajanahary (viriosy) ary nataon'olombelona (tsy voafehy ny fiparitahana) mitarika krizy ara-toekarena sy ara-pahasalamana manerantany.
Ny indostrian'ny fizahantany dia tafavoaka velona tamin'ny loza teo aloha: ny tsunami tamin'ny ranomasimbe indianina dia namono olona mihoatra ny 225,000 tao amin'ny faritra (26,2004 desambra 2.5), nitarika ny fihenan'ny fizahan-tany tany Maldives; ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana dia namoy ny 2010 lavitrisa Euros teo ambany fitarihan'ny rahona volkano niteraka ny fipoahan'ny volkano Islandy (9). Ny fanafihana 11/2001 tany Etazonia (2008), nanimba ny fahatokisan'ny mpizahatany ary nitaky vanim-potoana fanarenana maharitra maharitra efa-taona. Ny krizy ara-bola tamin'ny 4 dia nampihena 19 isan-jato ny fizahan-tany iraisam-pirenena. Saingy, tamin'ny fahatongavan'i COVID-XNUMX, sy ny tsy fisian'ny fitarihana matanjaka sy ny fampahalalana marim-pototra, ny mpitsangatsangana dia nianatra nisalasala ny amin'ny fiarovana sy ny filaminan'ny toerana fizahan-tany sy ny fizahan-tany, mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny fiarovana sy ny filaminana amin'ny dingana iray mankany amin'ny tsy fantatra.
Ny mpikaroka dia mamaritra ny loza fa "fanelingelenana lehibe amin'ny fiasan'ny vondron'olona na fiarahamonina iray izay miteraka fatiantoka olona, ​​ara-toekarena, ara-toekarena na tontolo iainana izay mihoatra ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonina voakasik'izany na ny fiaraha-monina miatrika ny fampiasana ny fananany manokana." Ny fahatsapana ny tsy fandriam-pahalemana mitombo ateraky ny areti-mifindra dia midika fa ny maha-manintona ny toeram-pizahan-tany dia faritana amin'ny fanekena ny otrikaretina sy ny fiarovana ny filaminana sy ny fiarovana azy io. Ny manintona dia mpandray anjara lehibe amin'ny fahombiazan'ny toerana fizahan-tany; na izany aza, tsy ampy izy ireo mba ho fepetra ahazoana fahombiazana, satria, "tsy misy fiarovana tsy misy fizahan-tany."
Ny mpitarika politika, ny mpitantana orinasa, ny haino aman-jery anatiny sy iraisam-pirenena dia nampandre ny olon-drehetra amin'ny planeta momba ny loza mety hitranga amin'ny COVID-19, mandrisika (raha tsy manery) ny fitokanana sy ny quarantine, manasongadina ny loza ateraky ny vondrona sy ny dia. Ireo fampitandremana ireo, miaraka amin'ny fanimbana ara-toekarena, dia namorona rivo-tahotra izay tsy manome tontolo iainana ho an'ny asa aman-draharaha na fitsangatsanganana, ka nahatonga ny indostrian'ny fandraisam-bahiny manerantany.